Kuwa Soomaalinimadii Sharafta Lahayd Ka Doortay Isaaqnimo Aan Meelna Gaynayn.
Adiga wax ala wax lagu yiraah lama garanayo! Reer Yurubka aanu maanta dhex joogno ayaa waxay Talyaaniga ku xantaan inuu yahay (The sick man of Europe). Waxa adiga maanta meel walba lala fadhin la,yahay calaacalkaagi, taahaagi, iyo tiiraanyadaadi oo sidii adigoo geelaagi la dhacay ayaa cabaadkaagi lala joogi la,yahay meel walba.
Malaha wax kuu maciino ayaadba la,adahay ee waxaad ku sugan tahay heer aad sankaaga ka qolfaysato ama aad ka xabkaysato.
Magaca Isaaq oo hadii la sarifo aanba goynayn koob shaaha qofka meelahaas wadwada soo qof waalan oo maryihii dhigtay maaha, amaba waali soo wata.
Adugu bal waxaad is waydiisa goorta uu qof Ilaahay kasoo jeediyay qabiilka Hawiye ama Daarood uu adiga cadawgaaga noqday waa goorma? Bal yaa ii sheegi kara goorta uu qabiila la dhaho Hawiye ama Daarood iyo qabiil la dhaho Isaaq cadaw isu noqden amaba cadaawad isu qaadeen, waa goorma goortaasi?
Hadaad haamooteen oo uu damac ilaa iyo heerkaas ah ini galay iyo inaad damacdaan inaad kaligiin Dawlad isku magacawdaan, oo aad ka go,adaan Soomaali inteeda kale, sow ceeb idinkuma aha oo waliba doqonimo midda ugu wayn soomaha?
Qabiilka Isaaq la yidhaah wuxuu ka masuul yahay amaba qabiilada Soomaaliyeed u horseeday in uu Qarankii Soomaaliyeed kala jabo, waliba waxay muujiyeen heerka uu gaadhsiisan yahay aaminada qabiilkooda.
Dunida waxaa ugu daran cudurka uu qofku isku rido! Shalay Dawladii ninkii Maxamed Siyaad la odhan jiray markay dhacday waxaad is galisay cudur aan loo baahnayn oo waxaa cudur wayn kugu noqotay in aad ka aamin baxdo midnimadii, qaranimadii, dawladnimadii, Soomaalinimadii iyo walaaltinimadii idinka dhaxaysay Soomaali inteeda kale.
Somaliland oo ka mid ah Somaliya in ay ka go,do Soomaali inteeda kale, marnaba waa wax aan la isoo marsiin karin, wax caqliga galayana ma aha, oo waayo dadkan ay fogeenayaan ee ay Soomaalinimadii iyo wadaninimadii kala noqonayaan maanay dad Soomaali oo walaalahood ah oo waliba Muslim ah ahayn.
Bal sababta aad Soomaali inteeda kale maanta aad uga go,aysaa maxay tahay? Ma waxaad leedahay waa la i ciilay oo waa la i xasuuqay iyo sheeko caruureed? Daarood iyo Hawiye oo aad ogtahay waxa kala qabsaday 1991, iyagoo markasta is dagaalsan oo waliba xin aad u wayni ka dhaxeeyo, sowkuwa Barlamanka Somaliya wada fadhiya, dadka sidaa isu neceb sowkuwa maanta miiska wada fadhiya maaha? Bal adigu ma waxaad leedahay Isaaq baan ahay? Ileen annagu garan mayno wax aanu kugu tilmaane, dee malaha Soomaali maba tihidiin, waxaad ka dhamaan la,adihiin Morgan baa xasuuq noo gaystay iyo Koonfur baa na xumaysay, waxaasi hadey yihiin sababta aad Somaliland isugu magacawdeen, haddaba waayahee bal aduunka meel kasta martayoo dacaskiina kaaga dhamaadee wali cid ku leh anagaad aqoonsi naga helaysa miyeey jirtaa?
Aduun iyo aakharaba waxaad u seegtay oo ay kabuhu kaaga dhamaadeen sidaad saddexdan Malyan ee ku nool Gobollada Woqooyi aqoonsi ugu heli lahayd, walibo adigoo meel kasta maray, hada waa meel kasta.
Isaaq! Bal waxaan ku su,aalay goorta uu qof Soomaaliyeed oo Ilaahay u dhaliyay qabiilka Hawiye amaba Daarood uu adiga cadawgaaga noqday waa goorma? Miyeydaan marnaba is su,aalin?
Goorta uu qofka Ilaahay uu kasoo jeediyay labada qabiil ee Daarood iyo Hawiye ee inta dunidan uu dal, dad, af, dhaqan, dhiig, lafo, dheecaan, hees, gabay, geeraar iyo wax walba aad wadaagtaan- goorta uu kaasi adiga cadawgaaga noqday waa goorma? Maxaa ku qaaday oo aad waraabowga isugu riday?
War waad ceebaysan tahay adigu oo dadkii Soomaaliyeed ee sharafta lahaa ee kasoo jeeday qabiilka Isaaq waad ceebaysay. Soomaalina waad ceebaysay oo waa adiga midka ka masuulka ah in maanta Qarankii Somaliya la odhan jiray uu kala jabo, waa adiga midka u horseeday in maanta Qarankii Soomaaliyeed kala qaybsanaado oo aad isu malaysay in adigoo qabiil kaliyah ah aad noqon karto Dawlad calan leh, waliba aqoonsi leh.
Hadii la aqoonsanayo qabiil, waxaa la aqoonsan lahaa Oromo oo kaa tiro badan, Ogaadeen oo isku sheegta 7 Malyan ayaa la aqoonsan lahaa oo waliba adiga kugu soo laba laabmaysa? Bal hadaba waxaad is waydiisa sababaha loo aqoonsan waayay maamulkan aad la waalwalateen iyo calalkan aad calan aad usoo jihaadeen ku sheegaysan.
Kuwaasi waa kuwo qof kasta oo Soomaali ah oo siyaasada soo gala aragtida uu dadkiisa Soomaaliyeed iyo dalkiisa u leeyahay khariba. Kuwaasi waa kuwo ay Soomaalinimadu dhinac dhaaftay, oo Soomaalinimadii sharafta lahayd ka doortay qabiilka yar ee ay u dhasheen.
Kuwaasi danta Somaliland mooyee maxaa Soomaali inteeda kale u dan ah kuwa waligood ku fakaray ineysan ahayn ayaa la wada rumaysan yahay.
Soomaaliga Hawiye nacaya waa kee, maadaba nici kara, waayo waxaaba ka dhashay Aadan Cadde oo ahaa ninka kaliyah ee maanta baalka nadiifta ah ee taariikhda ummadda Soomaaliyeed dhex hurda.
Soomaaliga Daarood nacaya waa kee, (who is who) maadaba nici kara, waayo waxaaba ka dhashay Halgamaagi Xoriyada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed Sayid Maxamed Cabdulle Xasan, iyo abwaanadii caanka ahaa ee kala ahaa, Raage Ugaas, Cali Dhuux, Ismaaciil Mire, Qamaan Bulxan, Cabdilqaadir Xirsi YamYam, iyo dhawr kale.
Qofka dhibsanaya qaar ka mid ah qabiilada Soomaaliyeed waa qof aan dunidaba la socon oo aan aragti dheer lahayn. Sababtoo ah qofka ummaddiisa in ka mid ah naceyb u qaada waa qof ama calooshiisa la ciyaar ah ama dadnimadiisu liidato ama aragtidiisu ay foorarto.
Qof kasta oo Isaaq ah oo Soomaaliyeed oo dalkiisa iyo ummaddiisaba jecelna waxaa qasab ku ah inuu jeclaado walaalkiisa ka soo jeeda Hawiye ama Darrood ama Dgil iyo Mirirfle.
Hadaad Daarood iyo Hawiye nacayso, miyaanad ogayn iney dadkaasi ka mid yihiin rukumada ay dad ahaan Somaliya ku taagantahay maanta. Qofka Soomaaliga ah ee dhibsanaya walaalkiisa Soomaaliyeed, maanay ahayn danbi wayn oo uu Ilaahay ka galay, aakhirana la xisaabin doono.
Haddaba waqtigu wuu yaryahay oo inta dunidan la joogo ayaaba iska yar oo waliba kooban, maanta waxaad haystaan nabad aan Somaliya inteeda kale ka jirin. Ilaahay ha idiin siyaadiyo nabada, dhamaan Somaliyana nabad haka dhigo, nimankaas reer Woqooyiga oo aan ka mid ahay, kubadu idinka ayeey maanta dhinaciina taala, ama garoonkiina taala.
Maanta waxaa inila gudboon inaad u hiilisaan Somaliya iyo sumcadeedi, arrimaha Koonfurna wixii aad ka qaban kartaan aad soo bandhigtaan, inkastoo aan ka jeclaan lahaa inaad nabad u gogol xaadhaan.
Cabdullahi Yuusuf oo lagu eedeeyo inuu markasta dib u heshiisiinta hor taagan yahay maanta waa nin da, ah oo aan ka yarayn Fidel Castro. Soomaalidu waxay tiraah : Geeriyi hadey ku deyso, gabow baan ku deyn. Waxaaba marka dhici karta inuusan muddo dheerba inala sii joogin Korneylku. Waxaana haboon inuu isaguna ummada Soomaaliyeed cafis waydiisto ummadduna iska cafiso haduu geesinimadaas la yimaado. Qaranimadii ummadda Soomaaliyeed ee uu Maxamed Siyaad xooray ee uu waliba markii danbe bulaacada ku tuuray in dib loo soo cesho ayaa muhiim ah.
Dhibaatoyina Ay Tirsanayaan Isaaqu.
Waxaa marag ma doonto ah in dadkaas la gaadhsiiyay dhibaato balaadhan Soomaalinimadoodi iyo wanaagu Ilaahay u dhaliyay awgood.
Sida dalka iyo dhamaan ummadda Soomaaliyeedba ku habsatay maamul xumadii, magaagnimadadii iyo maan gaabnimadii Somaliya ka dhacday. Dadkaas sharafta leh waa dadka kaliyah ee ay dayuuradoodi kasoo duushay geggidoodi rushaysayna tan iyo xadka intey ka cararayeen dagaalki gobollada Woqooyi ku dhex maray SNM-ta iyo dawlada.
Dhibaatooyinkii soo gaaray Isaaq waxay gaarsiisay iney ka aamin baxaan Soomaalinimadii iyo iney waliba goostaan yagoo la baxaya Somaliland.
Haddaba waxaa muhiim ah si dadkaas Soomaaliyed ee sharafta leh ay mar labaad ugu soo noqoto Soomaalinimadii, wanaagi iyo walaaltinimadii ay waligoodba ka shaqayn jireen.
Waxaa muhiim ah maanta iney iyagu ummadda Soomaaliyeed hogaamiyaan. Waana sida kaliya ee lagu soo celin karo Soomaalinimadii, wanaagi iyo wadajirkii ummadda Soomaaliyeed.
Waa dad Soomaaliyeed oo xaq u leh iney dalkooda iyo ummaddooda hogaamiyaan. Kuwaas wax maamuli doona waa iney yihiin kuwa A-Z Soomaali ah oo dhiigoodu uu ku shaqeeyo qiiro iyo jacayl Soomaalinimo. Sababto ah waxaan aragnay kuwo farabadan oo qabiil kasta oo Soomaaliyeed u kala dhashay oo laakin aan dhab ahaan Soomaali ahayn.
Isaaq hadii la waayo Soomaaliyana waa la waayaya oo ma ay jirayso. Sababtoo ah Ilaahay oo isagu ah midka iska leh talada iyo sida ay dunidu u socoto ayaaba sidaas gartay oo ugu talo galay.
Haddaba marka inagau xaqiiqdeena iyo heerka Somaliyi maanta ku sugan tahay loo soo noqdo waxaa aad iyo aad muhiim u ah iney dad ka tirsan qabiilka Soomaaliyeed ee sharafta leh ee Isaaq ina maamulaan. Waana iney meesha yimaadaan dad samaan iyo wax garad ku badala xanuunki iyo dhibaatooyinkii lasoo maray.
Aduunku waa dugsi weyn oo nolosha ayaana macalin ka ah. Waxaadna maalin walba la kulmaysaa waxyaalo aad la yaabto. Hadii ay dhacdo dad Soomaaliyeed oo walaaladaa ah iney nolasha idin kulmiso oo aad la yaabto dhaqan xumadooda iyo mararka qaar xumaatada ku jirta, waxaysan ka fursanayn inaad iska dul qaadato oo aad baryo iska wad wado si aad u ogaato maalinba maalinta xigta sida ay u fakarayaan, xumaatada ku jirta, sababta ay ugu jirto, inta ay gaarsiisan tahay, waxyaalaha khuraafadka ah ee ay iska dhaadhiciyeen ama aaminsan yihiin.
Si kastaba, maanta dadkani waxay mudan yihiin in lagu daydo oo waliba Jaa,izad tan ugu qaalisan lag gudoonsiiyo maamulkooda ay dhisteen awgood, waxaan shaki ku jirin in hadii maanta ay Soomaali is wada raacdo ooy gacmaha is wada qabsato, aanay jirin sabab ay ku diidan Isaaqu in ay ka mid noqdaan bulshadan ay isku diinta iyo dhaqankaba yihiin.